Waan amma jiru kun hundi darbee abbaa kiyya waliin akka guyyaa tokko waliin jiraadhu abdiin qaba – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooWaan amma jiru kun hundi darbee abbaa kiyya waliin akka guyyaa tokko waliin jiraadhu abdiin qaba
Waan amma jiru kun hundi darbee abbaa kiyya waliin akka guyyaa tokko waliin jiraadhu abdiin qaba
“Waan amma jiru kun hundi darbee abbaa kiyya waliin akka guyyaa tokko waliin jiraadhu abdiin qaba”
Kelll Media waliin turtii taasisteen mucaan Kol. Gammachuu Ayyaanaa shamarree Meron Gammachuu haala abbaan ishee keessa jiraniifi haala ture ibsiteetti.
“Yeroo ani waggaa 3 ture kan inni na dhiisee deeme. Ergasii waggaa 18 booda abbaa kiyya waliin erga inni Ertrea irraa deebi’ee wasiilli kiyya obboleessi abbaa kiyya na barbaadee na argee abbaa kiyya waliin wal nu quunnamsiise.
Abbaa kiyya waliin waggaa 3 keessatti waggaa tokko kan hin guutne qofaan waliin jiraadhe. Akka Asmaraa irra dhufeen baatii 3 kanin guutne waliin jiraadheen Abbaan kiyya hidhamee ture. Erga hidhamee bahee booda baatii 8 waliin jiraadhee booda ammas irra deebiin hidhame. Walumaa gala Abbbaa kiyya waliin qaamaan kanan jiraadhe waggaa tokko kanin taane jechuu nan dandaha. Waggaa 2 mana hidhaatti deddeebi’aan isa gaafachaan jiraachaa jira .
Abbaan kiyya maaliif akka akkas tahe naafin galu ture. Maaliif akka hogganaa ABO tahe naafin galu ture, maaliif akka wareegama akkasii akka kaffalu naafin galu ture, garuu nama dhugaaf dhaabbatu tahuu amma hubadheen jira. Wareegama kam iyyuu yoo kaffale ummata isaa waan jaallatuu fi itti gaafatamummaan waan itti dhagahamuuf tahuu amma hubadhee ofii koos of amansiiseen jira.
Amma garuu Abbaa dhugaaf dhaabbatu waanin qabuuf baayyeen boona. Jalqaba waanin hin beekneef natti dhagahama ture. Amma garuu cinaa dhaabbadhee akkan isa jajjabeessun hubadhe.
Abbaan kiyya ummata isaaf jedhee jireenya isaa ummata isaaf kennuu isaatti baayyeen gammada. Dhugaaf jedhee jireenya isaa ummata isaaf kennuu isaatti ani carraa qabeettiidha. Uummata isaaf Abbaa dhaabbatu qabaachuu kiyyatti.
Abbaan kiyya bilisa jedhamuu isaan dura dursee sanbata duraa mana hidhaa deemee isa gaafadheen ture. Garuu Abbaan kiyya ‘bilisa jedhamus waan dhufu hin beekamu waan taheef hundayyuu amantee simachuu qabda’ jedhee na jajjabeessaa ture. Akka kuni dhufu dursee waan na hubachiiseef homaa nattin fakkaanne. Dursee naaf himee waan tureef jechuudha. Sanbata mana hidhaa deemee isa dubbiseen Wixata bilisa jedhame.
Abbaan kiyya kanin yaaduu ol cimaa waan taheef anaan illee cimtuu na godheera. Yeroo baayyee anatu hidhamaa fakkaata malee Abbaa kiyya miti. Yeroon isa gaafachuu deemu isatu na jajjabeessa akka ani hidhaa keessa jiruutti. Kanaaf aniyyu akkan cimu kan na godhe isa waan taheef Abbaa akkasii qabaachuu kiyyatti yeroo hunda gammachuu guddaan qaba.
Gammeen gorsaadha; barsiisaadha!
Waan amma jiru kun hundi darbee Abbaa kiyya waliin akka guyyaa tokko waliin jiraadhu abdiin qaba. Nama siyaasa sirnaan beeku Abbaa akkasii qabaachuu koottis hedduun itti boona.”
Meeron Gammachuu Ayyaanaa Kelloo Media irratti kan dubbatte keessaa fudhanne.
Eritrea troops killed 110 civilians in Tigray massacre